यूरोप मा यात्रा | छुट्टी | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
यूरोपमा भ्रमण स्थलहरूको फोटोहरू
युरोपेली महाद्वीपमा, धेरै विविध जनहरू एक संस्कृतिका एक अपेक्षाकृत सानो ठाउँमा संगै बस्छन्। जबकि पुरुषहरु र महिलाहरु मा Bavarianerhtofest मा leaderhosen र dirndl मा मना रहे हो, स्पानीर्ड्स गर्म मिड सूरज मा siesta हुनेछ। जहाँ युरोपमा सबैभन्दा विविध विविधता र बहुसंख्यकवाद भेटिन्छ, त्यहाँ हरेक फोटोग्राफरको हृदय धारण गर्दछ।
युरोप: संस्कृतियों को एक पिघलने बर्तन
धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो छुटहरू कैरेबियनको गर्मीमा वा उत्तर अमेरिकी महानगरीयमा खर्च गर्न मनपर्छ। अरूले एशिया वा अफ्रिकाका नयाँ संस्कृति पत्ता लगाउँछन्।
रंग र आफैंलाई डिजाइन गर्ने युरोप युरोप
तथापि, धेरै यात्रीहरूले बिर्सन्छन् कि हाम्रो संसारको अन्य महाद्वीपको विपरीत, हाम्रो ढोकामा संसार पनि प्रस्ताव गर्न विभिन्न प्रकारको छ।
स्कैडिनेविया द्वारा प्रदान गरिएको एक सुन्दर वातावरण मा Dreamscapes। विशेष गरी, यात्रीहरूले आफ्नो व्यस्त दैनिक रोजगारीबाट बच्न शान्ति र विश्राम खोज्दै यूरोपको उत्तरमा सही छन्।
जंगली वा Panaromabild एक सूर्यास्त, स्कैनडिनेविया को धेरै पोखरी को एक प्रतिबिम्बित छ जसमा एक एल्क को फोटो कि, तेजस्वी शट स्वीडेन, नर्वे र फिनल्याण्ड मा प्रत्याभूति छन्।
तर यदि उत्तर अझै पनि हल्का छ भने, गर्मीमा पनि, तपाइँ दक्षिणी युरोपेली राज्यहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। स्पेन, इटाली र पोर्चुगल मात्र प्रस्तावित गर्न को लागी सूर्य र समुद्र तट मात्र छ तर एक आकर्षक संस्कृति र इतिहास पनि खोज्न को लागी। दूर समुद्र तट समुद्र तट देखि र देश को इंटेल मा विशाल होटल, यात्रीहरु लाई एक पूरी नयाँ पहल देखि सम्बन्धित देश को जान सक्छ, जो सबै समावेशी अवकाश को शामिल गर्न सक्छ। त्यसोभए पेनिनेसेमा केही चल्ने र यात्राको साथ कसरी सानो भाडाको अपार्टमेट? कुनै पनि अवस्थामा, शानदार चित्रहरूको लागि धेरै अवसरहरू उठाइनेछ।
निस्सन्देह, युरोपेली शहरहरूमा पनि धेरै प्रस्ताव छ। पेरिस र लन्डन अपेक्षाकृत हामीलाई युरोपेली नजिक छ र अझै सम्म धेरै थोरै मानिसहरूले शहरहरू पहिले नै देखेका छन्। जबकि अमेरिकन वा एस्किआइहरूले महँगो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान गर्नुपर्छ, त्यस शहरका यात्राहरु हामीलाई मात्र केहि घण्टा र कम पैसा खर्च गर्दछ।
मलार्का - संस्कृति, परिदृश्य र पार्टी टापु बीच
साथै, स्वाभाविक सामाजिक मिडिया प्रोफाइल कि क्लासिक फोटो एल्बम वा घरेलू क्यानभास लागि उपयुक्त लण्डन एफिल पेरिस टावर, बिग बेन र यस्तो रोमन Colosseum अन्य आकर्षण को तस्वीर लिन।
यहां सूचीबद्ध संभावनाहरु लाई केवल वास्तव मा युरोप मा खोज्न सकिन्छ को एक सानो भाग को प्रतिबिंबित गर्दछ। सबै पछि, आइसल्याण्ड, लिथुआनिया वा इस्टोनिया जस्तो यो के हो यो वास्तवमा थाहा छ? अर्को छुट्टीमा यसलाई पत्ता लगाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका र उनीहरूको सम्झनामा फोटोहरूमा राख्छ।
Meteora मठहरु, ग्रीस
बार्सिलोना, साग्राडा फिल्मियािया
भेनिस, ग्रैंड नहर
मलार्का, कैडेटहरूको कैथेड्रल
माल्टा, ला वालेटा